हाम्राे बारेमा – Janadesh Daily | National Daily
सम्पादकीय हामी जलजला मिडिया प्रा. लि. को अगुवाईमा जनादेश डेली डट कम मार्फत् विश्वभरका जनसमुदायका बीचमा आएका छौ । यो अनलाइनले नेपाललाई केन्दविन्दु बनाएर क्रान्तिकारी विचारहरुको रक्षा र विकास गर्न सघाउने छ । आम श्रमजीवी जनताले निर्देश गरेका आदेशहरुलाई सम्प्रेषण गर्न आश्यक रहेको महसुस गरी देशमा भइरहेको परिवर्तनलाई समेत संस्थागत गर्ने कार्यमा सहयोग मिलोस् भन्ने धेय राखिएको छ । जनताले चाहेको परिवर्तनको पक्षमा कलम चलाउनुलाई हामीले आफ्नो दायित्व ठानेका छौ । यस कार्यबाट आम जनताको इच्छा, सहमति वा असमति सम्बन्धी धारणाहरु समेटिने विश्वास लिइएको छ ।
हामीले बुझेको जनादेश निर्वाचन, जनमत संग्रह, जुलुश प्रर्दशन, आन्दोलन, जनयुद्ध, सहमति वा असहमति जनाउने अभिब्यक्ति जस्ता विभिन्न कोणबाट प्राप्त भइहेको हुन्छ । यसमा बहुजनको हित हुने र परिवर्तनका पक्षमा जनमत निर्माण हुने कार्य नै हाम्रा सरोकारका विषयहरु हुन् । नेपालमा संघीय गणतन्त्र ल्याउन जति जनपक्षीय मिडियाको भूमिका रहेको थियो, त्यही प्रकारले यसको रक्षा र विकासमा मिडियाकर्मीहरुले त्याग र तपस्या गर्न आवश्यक देखिएको छ । यसलाई हामीले मिडियामा मिसन र ब्यवसायिकताको चिनियाँ पर्खाल लगाउनेहरुको बीचमा उभिएर समकालीन इतिहासको माग बुझ्न जरुरी छ भन्ने ठानेका छौ ।
आजका दिनसम्म जनताले चाहेको परिवर्तन हुन सकेको छैन । जबसम्म जनताको दिल दिमागमा परिवर्तनको महसुस हुन्न, तबसम्म संरचनागत परिवर्तनले केही पनि फरक पार्दो रहेनछ । यसैले जनताको दिल दिमागमा ब्यवहारिक परिवर्तनको महसुस गराउने सन्र्दभहरु नै जनताका आदेश बन्न जाने भएकाले समाचार र विशेष गरी विश्लेषणसहितका जनपक्षीय विचारहरु मार्फत् समाजमा निरन्तर जागरण ल्याउन लागि पर्नेछौ । यो परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने सँस्कृतिक आन्दोलन समेत हुने भएकाले जनादेश डेली डट कमले तपाई हामी सबैको क्रान्तिकारी धारणा सम्प्रेषण गर्नेछ । आउनुहोस्, सबै क्षेत्रबाट यस महाअभियानमा बहुजनको हितमा काम गर्ने सन्दर्भमा सहकार्य गरौ । क्रान्तिकारी पत्रकार कृष्ण सेन इच्छुकहरुले कोरेको गौरबमय परम्परा कायम राखौ ।